Ny hazondamosin'i Trump manoloana an'i Shina ve ny fiandohan'ny fahalavoan'ny dolara sy ny fianjeran'ny toekarena? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 May 2020	• 11 Comments
Miaraka amin'ny famoahana ny fahombiazan'ny fenitra volamena sy ny fenitry ny solika, ny dolara dia nivadika ho vola izay tsy maintsy hivoaka tsy misy fetra. Antsoinay hoe Fiat vola ilay izy. Ny vola any Fiat dia ratsy amin'ny varotra iraisam-pirenena. Raha ny marina, ny fanaovana pirinty an-tapitrisany maro dia miteraka ny fihenan'ny vola.
Satria ny banky afovoany amerikana (ny Fed) dia mifehy ny fizotran'ny famoronana dolara ity ary ny dolara no fenitra amin'ny varotra iraisam-pirenena, ny fihenan'ny dolara ity koa dia misy fiantraikany amin'ny fitotonganan'ny vola hafa, anisan'izany ny euro.
Miaraka amin'ny vidin'ny menaka barika vetivety (izay midika fa nahazo vola hividianana menaka ianao) tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, dia tsara fa tsy ny fenitra intsony ny menaka. Ny solika dia hosoloina any amin'ny kilalao vaovao indrindra i Bill Gates (mifototra amin'ny masoandro manamboatra hidrôzinina ho an'ny milina fanosotra).
Ny antony tokana sisa tavela amin'ny tsy fenon-tsoa natokana ho an'ny dolara amerikana (heto). Noteren'ny NATO ny firenena na ny mpitarika rehetra hiala amin'ny dolara. Efa niditra an-tsehatra tamin’ny baomba sy grenady ary manadio ny mpitarika izany.
Yugoslavia 90s. Mafy ny trosa rehetra (tsy miankina dolara). Tafika matanjaka (fa tsy mpikambana ao amin'ny OTAN ary tsia no. 4 raha ny herin'ny tafika an'izao tontolo izao). Taorian'ny nahafatesan'i Tito, nanomboka nifandona ny vahoaka mba hanomboka ady izay mila handravana ny firenena, ka mamela ny IMF hiditra ao ary hindrana vola amin'ny fananganana indray (fiankinan'ny dolara).
Irak, i Saddam Hussein dia naniry hivarotra ny menaka amin'ny euros. Diovy manadio.
Libya, Moammar Mohammed al-Qadhafi dia maniry ny dinar afrikanina tohanan'ny volamena hanafaka ny fiankinan-doha dolara. Madio sy milamina.
Ankehitriny, ny ady tany Syria dia naneho fa ny herin'ny NATO (kilalao amerikana) dia tsy ny fanjakana intsony fa efa manomboka ny fiafaran'ny fenitry ny dolara manerantany ihany koa. Mihamaro ny firenena mihemotra any Etazonia, ary ny valintenin'i Donald Trump dia faran'izay henjana: ady varotra. Ary izao - miaraka amin'ny toe-javatra coronavirus - miverina amin'ny fanamafisana an'i China izy. Tamin'ny tafatafa farany niarahany tamin'ny Vaovao FOX hoy izy na dia te-hanimba ny fifandraisana rehetra amin'i Shina aza izy.
Ho an'ny firaketana an-tsoratra dia ilaina ny mahafantatra fa nahavita nitahiry ny toekarenany ny governemanta Shinoa na mihoatra ny dolara. Io dolara io dia natao ho an'ny varotra iraisam-pirenena ihany, fa ny banky afrikana sinoa dia efa nividy dolara tamin'ny multisialin'ny firenena ary nahavita nitazona mafy ny sinoa yuan teo amin'ny sisin-taniny.
Ankoatr'izay, i Shina dia manana fiantraikany ara-toekarena lehibe any amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao ary ny tetikasa Sinoa Belt and Road Initiative (BRI) dia manome antoka ny fiaraha-miasa amin'ny firenena 120 sy ny multinasaly 40 lehibe. Mahatonga an'ireo firenena sy orinasa ireo hiantehitra kokoa amin'i Shina izany.
Rehefa nikiakiaka i Donald Trump fa te hanongotra tanteraka an'i Shina izy, dia toa ny fihetsika farany famoizam-po farany amin'ny hery mahery vaika izay very tsy an-kijanona. Na dia mody aza i Trump fa ny fahatezerany dia mifandraika amin'ny faonan'i Shina amin'ny virus corona, ny tena fototry ny fahasosorany dia mety ho efa ho very ny dolara alehan'ny dolara ary miha mahazo vahana ny yuan.
I China dia nampiditra iray tao anatin'ny fetrany vola cyber vaovao midika hoe fandoavana: ny e-RMB (Ren Min Bi, izay midika hoe 'volan'ny vahoaka'). Ity e-RMB ity dia sedraina amin'ny tanànan'ny sinoa maro ankehitriny, ao ny Shenzhen, Suzhou, Chengdu ary Xiong'an. Ao amin'ireo tanàna ireo, ny e-RMB dia saiky eken'ny ankapobeny ny fandoavana karama, ny fitateram-bahoaka, ny sakafo ary ny fividianana any amin'ny ankamaroan'ny fivarotana. Ny rafitra dia mifandray amin'ny WeChat sy AliPay (avy any Alibaba). Ity cryptocurrency vaovao ity dia rakotry ny Banky Sinoa.
Ny IMF dia nametraka ny fitsipiky ny zon'ny mpamorona manokana tamin'ny taona 2016, izay misy ny "vola taloha" mamorona karazana backup ho an'ny fenitra SDR cryptocurrency vaovao. Ny olana amin'ity hetsika IMF ity, na izany aza, dia ny dolara mamolavola 41,73% mizara ao anatin'ity fenitra cryptocurrency vaovao ity, raha toa kosa ny sinoa yuan dia 10.92% fotsiny (yen Japoney 8.33%, British Britain 8.09%, euro 30.93%). Noho izany, raha saika ho lasa toekarena matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao ny toekarena sinoa, kely vaika ny ampahany amin'ny standard IMF crypto (SDR).
Ka misy tokoa ny ady ara-bola mitohy; ady izay mihodina amin'ny fametrahana fenitra vola vaovao. Toa very lanja ny dolara ary nanome krizy farany ny krizy corona, satria tsy mihetsika haingana loatra ny resaka gazety. Izany no ohabolana ankehitriny, satria tsy misy vola vita pirinty intsony. Nomena fotsiny ao anaty solosaina iray no ampitomboina.
Ny sinoa yuan dia toa mihamalalaka, raha toa ny dolara dia miharatsy hatrany.
Ny fanontaniana ankehitriny dia raha te-hifindra avy amin'ny fenitra dolara mankany amin'ny fenitra yuan ny multinasiona sy banky na raha tokony hisy karazana fenitra volamena iraisam-pirenena indray. Ny SDR ho toy ny fenitra crypto dia toa tsy safidy azo itokisana ihany koa, satria miaraka amin'ny fihenan'ny dolara dia hianjera koa ny SDR (noho ny fizarana dolara 41,73% ao amin'io SDR). Noho izany dia mila esorina ny fisarihan'ny vola fiat (vola vita pirinty tsy misy fetra) ho fototry ny rafitra ara-bola iraisam-pirenena.
Toa tonga amin'ny fotoanan'ny farany ny dolara. Ny ekonomika any Etazonia sy Eropa dia ho voadona mafy amin'ny volana ho avy noho ny vokatry ny krizy amin'ny korona. Efa miakatra ny vidin-tsena amin'ny tsenambarotra. Betsaka ny orinasa hianjera ary noho ny an'arivony tapitrisa no vita pirinty, io fidiram-bola io dia hitranga avy hatrany ho an'ny rehetra ao anatin'ny volana ho avy. Ny olona izay mbola manana tahiry dia hanahy.
Raha ny marina, ny fizaram-pahamoriana dia manararaotra orinasa maro sy mpamonjy voina. Amin'ny fahalavoana dolara, toa ny hany volamena no tokana azo antoka, satria ny haben'ny volamena eto an-tany dia matetika ampiasaina amin'ny famatsiam-bola mandritra ny famatsiam-bola.
Na izany aza, ny bitcoin dia toa mihamitombo hatrany ny fiarovana azy. Miaraka amin'ny fandrahonana mety hianjera amin'ny banky (satria ny orinasa banky sy ny olona tsy afaka mandoa ny trosany na ny fahalianana amin'ireo trosa ireo) dia mitera-doza ny fandrahonana bail-out sy bail-in. Midika izany fa na ny fanjakana dia mitahiry ny banky (vakio: ny mpandoa hetra) na ny tahiry dia entina hamonjena ny banky.
Noho izany dia mety hahita vola be amin'ny sidina bitcoin sy volamena isika amin'ny volana ho avy.
Azo inoana fa ny sidina mankany bitcoin no ho lehibe indrindra, satria tsy mividy volamena fotsiny ianao amin'ny fanerena bokotra. Nanokatra poketra bitcoin ianao dia tsy nanam-potoana ary inona no ao amin'ny bankinao anio ao amin'ny kitaponao bitcoin rahampitso. Ny sidina mankany bitcoin, miaraka amin'ny fitsipiky ny fitrandrahana ifotony, dia mety hanome ny toerana matanjaka iraisam-pirenena bitcoin amin'ny bitcoin fa mety misy ny fahafaha-manao ny toeran'ny dolara.
Ny sinoa shuan dia mety ho voasaron'ny banky afrikana sinoa, fa ny antony hoe mbola volamena ihany no miasa ho sandan'izao tontolo izao dia miafina amina resaka tsy maintsy anjaranao ny voloko. Mila manana izany ianao amin'ny tany amin'ny alàlan'ny asa fangady amin'ny mineraly volamena, izay dingana lafo sy miasa mafy ary misy tsy fahita. Ny fitsipika momba ny fitrandrahana Bitcoin dia miorina amin'ny hevitra mitovy ihany, araka ny nohazavaina ao ity lahatsoratra ity.
Ny volan'ny fifanakalozana ara-barotra bitcoin manerantany dia mihamaro ankehitriny ary maro an'isa sy mpampiasa vola betsaka no liana amin'izany ary miditra ao. Raha manampy an'io zava-misy io ianao amin'ny famerenam-bola mihoa-pampana sy ny fahalavoana dolara mety hitranga, dia toa ho an'ny marobe bitcoin izany dia ny trano fonenana baomba. Noho izany dia manana fahafaha-mametraka ny fenitra iraisam-pirenena vaovao ary raha latsaka ny dolara, dia mety haka ny toeran'ny dolara amin'ny fenitra mahazatra SDR ny IMF ny IMF.
Lisitry ny rohy loharano: edition.cnn.com, ft.com, globalresearch.ca
Ny tantara dia mampiseho tsingerin-taonan'ny 90 taona ary ny tondro rehetra dia mampiseho fihoaram-piainana tsy azo ihodivirana
Tags: ary, fehin-kibo, bitcoin, FEPETRA, Shina, Sinoa, Coronavirus, krizy, dolara, e-RMB, Featured, vidim-piainana, fandraisana an-tanana, lalana, SDR, Trump, Val, Yuan
18 May 2020 amin'ny 13: 22
Raha ny hevitro dia hahita fizarazarana amerikana eo anelanelan'ny dolara iraisam-pirenena (petro) sy ny USD eo an-toerana ho an'ny Etazonia. Ity farany dia hihena be, toy ny scenario toa an'i Venezoela. Ny fizarazarana dolara dia tafiditra ao anatin'ny famerenana ara-bola, satria ny firenena tsirairay dia namatsy vola amin'ny olom-pirenena maro (amin'ny vola eto an-toerana, toy ny Iniase rupees) tamin'ny sekretera trosan'ny trosa amerikana ao anatin'ny rafitra fampindramam-bolany mba hamatsiana ny varotra iraisam-pirenena izay raikitra amin'ny USD. Ny firenena dia tsy te hahita ny fitakiany Etazonia z = evaporate noho ny hyperinflation, noho izany ny foto-kevitra momba ny fisarahana. Ankoatr'izay, i Shina dia manana mihoatra ny iray trily tapitrisa ny trosa amerikana. Raha te ho diso i Shina dia azon'izy ireo manary ny trosa eny an-tsena ary raha tsy misy ny fangatahana dia voatery ny hividy ity trosa ity ny FED izay mety hiteraka vovobony any Etazonia. Ny henjana nataon'i Trump momba ny ady amin'ny tariffs, noho izany dia toa ahy ny sehatra ho an'ny vahoaka hanatanteraka ny famerenana ara-bola. Aza adino fa ny famerenana ara-bola dia midika fa ho be ny trosa maro, satria miaraka amin'ny fanavaozana dia tsy misy dikany ny fampidirana trosa ratsy amin'ny rafi-pitondran-tena amin'ny rafitra vaovao. Aza adino fa ity dia hihatra amin'ny vondron'olona voafantina fotsiny fa tsy amin'ireo mpampindram-bola na olona manana trosa manokana, dia hitohy fotsiny izany amin'ny rafitra vaovao. Mino ihany koa aho fa hahita fankasitrahana goavana amin'ny dolara iraisam-pirenena isika alohan'ny hanjavonana amin'ilay sehatra. Io fitomboana io dia noho ny fangatahan'ny vola dolara hametrahana ny kompana feno derivatives. Mino aho fa io no ho fotoana ihany koa izay hivarotra ireo mpilalao (banky sy banky afovoany) amin'ny trosany amerikana.
18 May 2020 amin'ny 13: 55
Ny hydrogen dia ny revolisiona angovo izay ho avy ary hiteraka paradigma fanovana. Ankoatra ny fiantraikany mivantana ara-toekarena, saika ny modely rehetra miorina amin'ny loharano angovo taloha dia afaka mivoaka ny varavarankely.
Ny ady ifanandrinan'i Shina sy Amerika dia efa mandeha ary hitombo ihany noho ny fahafatesan'ny masoivoho sinoa any Israely sy ny fiampangana biowarfare. Tokony hanara-maso ihany koa ny fananganana tafika ao amin'ny Ranomasin'i Chine Atsimo (Diego Garcia).
Hong Kong dia fiasa CIA Otpor mahazatra ary mazava ho azy fa hamaly i Chine amin'ny fomba araka ny tokony ho izy.
19 May 2020 amin'ny 12: 59
@salmon, ho fotoan-dehibe izao.
18 May 2020 amin'ny 14: 45
sazy bebe kokoa aza, ny TSMC dia orinasa Taiwanese tsofoka tampoka any Sina.
Manome fanampiana ho any Huawei ny sombin-tariby lehibe indrindra momba ny fifanarahana momba ny chipmaker eran'izao tontolo izao
18 May 2020 amin'ny 18: 13
18 May 2020 amin'ny 18: 14
18 May 2020 amin'ny 20: 17
18 May 2020 amin'ny 22: 05
Ny afrikana israeliana iray amin'ny chan 4 dia nilaza i Shin Bet, 'internal' israeliana ', namono ny masoivoho noho ny fangatahan'ny Shina taorian'ny nanandrana namily sy nizara vaovao momba ny lab biraon'ny ady tany Shina, i Shin Bet, ary avy eo niampita roa heny.
19 May 2020 amin'ny 07: 58
jereo ny horonantsary etsy ambony avy amin'i ZIO dia be loatra ny atahorana ho an'ireo olona ahiahiana mahazatra.
21 May 2020 amin'ny 16: 00
tsara, izao efa niahiahy Bannon izao dia efa miandry ny fifandonana mivantana amin'i Shina.
Bannon WarRoom - Olom-pirenena amin'ny Repoblika Amerikanina
66,6K mpandray anjara
26 May 2020 amin'ny 01: 24
« Avereno mivantana ny demokrasia ny lalana fohy noho ny fanakatonana sy ny fanarenana ny toe-karena
Tsy afaka miditra ao amin'ny fivarotana intsony ianao raha tsy manome ny anaranao sy ny laharan'ny andevo ao amin'ny counter na dia vao manomboka fotsiny izany »
Total fitsidihana: 2.464.501